Agaasinka guud ee TÜDEMSAŞ wuxuu qaadaa shaqaale aan qandaraas la siinin, Kaaliyaha takhasuska IT-ga iyo kaaliyaha kormeeraha imtixaanka | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaIyadoo la eegayo Agaasimaha Guud ee TUSAALMA, shaqaalaha ayaa helaya shaqaale aan lacag la siin, Kaaliyaha Khabiirka ee Kaaliyaha iyo Kormeeraha Kaaliyaha
Iyadoo la eegayo Agaasimaha Guud ee TUSAALMA, shaqaalaha ayaa helaya shaqaale aan lacag la siin, Kaaliyaha Khabiirka ee Kaaliyaha iyo Kormeeraha Kaaliyaha
20 / 08 / 2013 Shaqooyinka, GUUD, Headline
Meelaynta Warshadaha Difaaca, Teknoolojiyada Warfaafinta iyo Hay'adda Isgaarsiinta, TÜDEMSAŞ Agaasimaha Guud ee Shaqaalaha oo aan heshiis la galin shaqaalaha shaqaalaha imtixaanka, Kaaliyaha Takhasusaha iyo Kormeeraha Kaaliyaha.
Qalabka Badbaadinta Warshadaha 27 shaqaale qandaraasle ah oo aan mushahar lahayn ayaa qaadan doona imtixaanka afka, TÜDEMSAŞ Kaaliyaha Guud ee 1 iyo Maamulka Teknoolajiyada iyo Isgaarsiinta Macluumaadka 24 IT wuxuu kaa qaadi doonaa imtixaanka qoraalka ah iyo afka.
Maamulka Maareynta Warshadaha Difaaca, Macluumaadka iyo Teknoolojiyada Teknolojiyada Macluumaadka iyo Warfaafinta iyo Isgaadhsiinta Isgaarsiinta ayaa ku dhawaaqay soo iibinta shaqaale qandaraasle ah oo aanan la bixin, Kaaliye khibrad IT ah iyo kaaliyaha kormeeraha kaaliyaha ee rasmiga rasmiga ah.
Sida laga soo xigtay war-murtiyeedka, Undersecretariat for Industries Industries waxa lagu siin doonaa shaqaale qandaraasle ah oo ka tirsan shaqaalaha 27 iyada oo loo marayo baadhis afka ah si loogu sii wado maaddooyinka u baahan aqoon iyo khibrad gaar ah. Shaqaalaha qandaraaska ah ee aan la bixin ayaa loo shaqaaleyn doonaa in lagu shaqeeyo 17 Group A (Tijaabinta Tayada iyo Takhasusaha Takhasus / Xirfadlaha Macmiilka / Mashruuca Mashruuca) iyo 10 Group C (Kaaliyaha Fulinta). Codsiyada imtixaanka waxaa la samayn doonaa ugu dambeyntii 10 September Talaadada ilaa dhamaadka saacadaha shaqada. Imtixaanka waxaa qaban doona wareysi.
-24 IT QAXOOTIGA WAXYAABAHA LAGA HELO-
Hay'adda Macluumaadka iyo Isgaadhsiinta Isgaarsiinta ayaa qaadan doonta Kaaliyaha Takhasusaha 24 IT ee leh imtixaanka qoran iyo kan afka. Codsiyada waxaa lagu sameyn doonaa inta u dhaxaysa 2-6 September.
Musharixiinta xaq u leh inay qaataan imtixaanka gelitaanka ayaa marka hore loo qaadayaa imtixaanka qoraalka ah. Imtixaanka qoraalka ah waxaa lagu qaban doonaa 29 September. Codsadayaasha xaqa u leh inay qaataan imtixaanka afka waa inay soo gudbiyaan dukumintiyada ay tahay in ay u gudbiyaan hay'adda ugu dambeyn 3 ka hor taariikhda imtixaanka afka. Musharrixiinta waa inay qaataan ugu yaraan 70 si ay ugu guuleystaan ​​imtixaannada qoran iyo kuwa afka.
-1 AASAASKU GARGAARIDA LAGA HELO
TÜDEMSAŞ Agaasimaha Guud ee Guddiga Kormeerka, imtixaanka qoraalka ah iyo kan afka ayaa qaadan doona kaaliyaha kormeeraha 1. Codsiyada waxaa sameyn doona 21 ilaa dhammaadka saacadaha shaqada Isniinta ilaa Oktoobar.
Sida laga soo xigtay xayaysiinta; Musharrixiinta, qaybta KPSS P117 ee 70 iyo dhibco badan, halka koowaad ee 20 lagu darayo shuruudaha. Codsiyada waxaa sameyn doona 21 ilaa dhammaadka saacadaha shaqada Isniinta ilaa Oktoobar. Imtixaanka gelitaanka waxaa lagu qorayaa qoraal iyo afka. Si loo tixgeliyo in lagu guuleysto imtixaanka qoraalka ah, mid kasta oo ka mid ah fasalada laga soo qaatay kooxaha imtixaanka qoraalka ah ee aan ahayn luqadaha ajnebiga ah waa in aysan ka yarayn 60 oo celcelis ahaan waa inaanay ka yarayn 65. Imtixaanka qoraalka 26-27 Oktoobar 2013 (Sabti-Axad), Imtixaanka Luuqadda Dibedda; 26 waxaa la qaban doonaa Oktoobar 2013.
Isha: waxaan www.haberx.co
Ficilada koox ee horta Agaasimaha Guud ee Waddooyinka
Awooda Macluumaadka iyo Isgaarsiinta Teknolojiyada
qorista shaqaale qandaraasle ah
Meel-hoosaadka Siyaasadaha Difaaca
RayHaber 20.08.2013 Warbixinta Shirka